Maamulka Jubbaland oo sheegay in ciidamadoodu ay dagaal ku dileen 13 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandMaamulka Jubbaland oo sheegay in ciidamadoodu ay dagaal ku dileen 13 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan
July 5, 2017 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Meydka dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay soo bandhigeen Jubbaland. [Sawirka: Facbook]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dagaal ku dileen 13 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Jubbaland.
Dagaalka ayaa dhacay kadib markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo la dhaho Lugloow oo kuyaala duleedka magaalo xeebeedka Kismaayo habeenimadii xalay.
Khaalid Shiikh Cabdulaahi, oo katirsan saraakiisha amniga Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku dileen 13 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah.
Sargaalka ayaa sidoo kale sheegay in hub ay kamidyihiin AK-47 iyo PKM ay ka qabsadeen Al-Shabaab.
Garoowe-(Puntlan Mirror) Xaalada abaarta ka jirta gudaha gobolada Puntland ayaa maraysa meel aad u adag, iyadoo dadku ay u baahanyihiin gurmad deg deg ah. Dad badan oo xoolihii ay dhaqan jireen ka dhammaadeen ayaa hadda [...]